ကိုယျ့အမှားမပါဘဲ တကူးတကကွီးထိုးနှကျနတေဲ့လူတှကွေားထဲမှာရှငျသနျဖူးလား…?? – Shwe Pann Thee
Shwe Pann Thee Knowledge ကိုယျ့အမှားမပါဘဲ တကူးတကကွီးထိုးနှကျနတေဲ့လူတှကွေားထဲမှာရှငျသနျဖူးလား…??
ကြှနျမကတော့ ရှငျသနျဖူးခဲ့ပွီ…မကောငျးတဲ့အကွောငျးအရာတှကေကိုယျ့ကွောငျ့ပဲဖွဈလာသလိုမြိုးကိုယျ့ကွောငျ့ ကိုယျ့ကွောငျ့ဆိုတဲ့ အတှေးတှကွေားထဲမှာရှငျသနျဖူးခဲ့ပွီ…
ဒီလိုခံစားခကျြတှကေိုကြှနျမဘယျလိုတှနျးလှနျရမလဲ မသိဘူး..ကိုယျ့ထကျအကွီးတှဆေီကအကူညီတှလေညျး အမြားကွီးယူခဲ့ရတယျ..
ပွောစကားတှအေမြားကွီးနားထောငျခဲ့ရတယျ။။တှနျးလှနျနိုငျခဲ့တဲ့ အဖွကေတော့ကိုယျမလုပျတဲ့ အမှားတဈခုအတှကျကိုယျလိုကျခံစားနဖေို့ မလိုသလို အပွဈရှိသလို ခံစားဖို့လညျး မထိုကျတနျဘူးဆိုတာပါပဲ…
လောကမှာရှိသမြှ အမှား‌တိုငျးကကိုယျတဈ‌ယောကျတညျးကွောငျ့ ဖွဈလာတာ မဟုတျဘူး ဆိုတာကို သိရမယျ…။ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အပွဈတငျတာတှကေိုရပျရမယျ…။
ကိုယျ့ရဲ့ဖွဈတညျမှုကို ကိုယျတိုငျတနျဖိုးထားရမယျဘယျသူ့ဘယျသူမှလာပွီးတနျဖိုးလာလြှော့တာကို ခံစရာမလိုပါဘူးကိုယျ့ဘဝကို ကိုယျ့ဆုံးဖွတျခကျြတှနေဲ့ လှလှပပဖွတျသနျးပါ…
ကျွန်မကတော့ ရှင်သန်ဖူးခဲ့ပြီ…မကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကကိုယ့်ကြောင့်ပဲဖြစ်လာသလိုမျိုးကိုယ့်ကြောင့် ကိုယ့်ကြောင့်ဆိုတဲ့ အတွေးတွေကြားထဲမှာရှင်သန်ဖူးခဲ့ပြီ…
ဒီလိုခံစားချက်တွေကိုကျွန်မဘယ်လိုတွန်းလှန်ရမလဲ မသိဘူး..ကိုယ့်ထက်အကြီးတွေဆီကအကူညီတွေလည်း အများကြီးယူခဲ့ရတယ်..
ပြောစကားတွေအများကြီးနားထောင်ခဲ့ရတယ်။။တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့တဲ့ အဖြေကတော့ကိုယ်မလုပ်တဲ့ အမှားတစ်ခုအတွက်ကိုယ်လိုက်ခံစားနေဖို့ မလိုသလို အပြစ်ရှိသလို ခံစားဖို့လည်း မထိုက်တန်ဘူးဆိုတာပါပဲ…
လောကမှာရှိသမျှ အမှား‌တိုင်းကကိုယ်တစ်‌ယောက်တည်းကြောင့် ဖြစ်လာတာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို သိရမယ်…။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အပြစ်တင်တာတွေကိုရပ်ရမယ်…။
ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကို ကိုယ်တိုင်တန်ဖိုးထားရမယ်ဘယ်သူ့ဘယ်သူမှလာပြီးတန်ဖိုးလာလျှော့တာကို ခံစရာမလိုပါဘူးကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ လှလှပပဖြတ်သန်းပါ…